Acquia: Inona no atao hoe Sehatra momba ny angon-drakitra? | Martech Zone
Rehefa mifampiresaka sy mamorona fifanakalozana amin'ny orinasanao androany ny mpanjifa, dia mihasarotra hatrany ny mitazona ny fomba fijery afovoan'ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy. Nisy fivoriana iray androany maraina niaraka tamin'ny mpanjifanay izay nanana ireo olana ireo. Ny mpivarotra marketing mailaka azy ireo dia samy hafa amin'ny sehatra fandefasan-kafatra finday any ivelan'ny toerana fitahirizany data. Nifampiresaka ny mpanjifa fa satria tsy niraikitra ny angona afovoany dia nateraka na nalefa tamina tahiry ratsy ny hafatra indraindray. Izany dia miteraka fangatahana lehibe kokoa ho an'ny mpiasan'ny mpanjifa ary manorisory ny mpanjifany. Manampy azy ireo amin'ny fametahana indray ny rafitra amin'ny fampiasana hafatra hafa izahay API izany dia hitazona ny tsy fivadihan'ny data.
Fantsona vitsivitsy fotsiny izay miteraka olana. Alao sary an-tsaina ny rojo misy toerana marobe miaraka amin'ny tsy fivadihan'ny mpanjifa, ny fifanakalozana antsinjarany, ny fifaneraserana ara-tsosialy, ny fangatahan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny angon-drakitra momba ny faktiora ary ny fifandraisana amin'ny finday. Manampy izany ny fampihavanana ny valin'ny marketing amin'ny alàlan'ny loharanom-pahalalana omni-channel… yikes. Izany no antony Sehatra ho an'ny mpanjifa nivoatra ary mahazo vahana eo amin'ny sehatry ny orinasa. Ny CPD dia ahafahan'ny orinasa mampiditra sy mametraka sarintany data avy amina loharano an-jatony, manadihady ny angona, mamorona faminaniana mifototra amin'ny angona, ary mifandray tsara kokoa sy marina kokoa amin'ny mpanjifany amin'ny fantsona rehetra. Amin'ny ankapobeny, fomba fijery 360 degre an'ny mpanjifa izany.
Inona no atao hoe CDP?
Ny plateforme des data ho an'ny mpanjifa (CDP) dia tahiry mpanjifa mitambatra tantanan'ny mpivarotra izay mampivondrona ireo angon-drakitra mpanjifa avy amin'ny marketing, varotra ary fantsom-pifandraisana ahafahana manao modely ho an'ny mpanjifa ary mitondra ny traikefan'ny mpanjifa. Gartner, Hype Cycle ho an'ny Marketing nomerika sy ny doka
Araka ny CDP Institute, ny Customer Data Platform dia manana singa telo tena lehibe:
Ny CDP dia rafitra tantanin'ny mpivarotra - ny CDP dia natsangana sy fehezin'ny departemanta marketing, fa tsy ny sampan-draharahan'ny teknolojia fampahalalana. Ny loharanom-pahefana teknika sasany dia takiana amin'ny fananganana sy fitazonana ny CDP, saingy tsy mitaky ny haavon'ny fahaizana teknikan'ny tetikasa fitahirizam-bola mahazatra. Ny tena zava-dehibe dia ny marketing no miandraikitra ny fanapahana hevitra momba izay miditra ao amin'ilay rafitra sy izay asehony amin'ireo rafitra hafa. Manokana, midika izany fa ny marketing dia afaka manisy fanovana nefa tsy mangataka alalana na amin'iza na amin'iza, na dia mety mbola mila fanampiana avy any ivelany aza izany.
Ny CDP dia mamorona tahiry mpanjifa maharitra sy mitambatra - ny CDP dia mamorona fomba fijery feno amin'ny mpanjifa tsirairay amin'ny alàlan'ny fisamborana angona avy amin'ny rafitra maro, fampifandraisana ny fampahalalana mifandraika amin'ny mpanjifa iray ihany, ary ny fitehirizana ny fampahalalana hanarahana ny fitondran-tena rehefa mandeha ny fotoana. Ny CDP dia misy mpamantatra manokana ampiasaina hametrahana hafatra momba ny varotra sy hanarahana ny valin'ny varotra eo anelanelan'ny tsirairay.
Ny CDP dia mahatonga izany angona izany ho azon'ny rafitra hafa - ny angona voatahiry ao amin'ny CDP dia azon'ny rafitra hafa ampiasaina hamakafaka sy hitantanana ny fifandraisan'ny mpanjifa.
Acquia Customer Data sy Hub misy fifandraisana
Satria ny mpivarotra dia voakasiky ny zavatra niainan'ny mpanjifa iray manontolo, ny fanamafisana ny angon-drakitra ampiasain'ny mpanjifa manerana ny fantsona, ny takelaka ary ny faharetan'ny tsingerin'ny fiainan'ny mpanjifany dia nanjary zava-dehibe. Acquia dia mpitarika ao amin'ity indostria ity sy ny Data ho an'ny mpanjifa sy Hub misy fifandraisana manolotra:
Fampidirana data - ampidiro ny angon-drakitrao rehetra, amin'ny endrika rehetra, avy amin'ny loharanom-baovao rehetra manerana ny fantsona nomerika sy ara-batana miaraka amin'ireo mpampitohy sy API efa niorina 100 mahery.
Ny kalitaon'ny angona - manara-penitra, manala vola ary manome toetra tahaka ny miralenta, ny jeografia ary ny fanovana ny adiresy ho an'ny mpanjifa rehetra. Miaraka amin'ny fampitoviana mitovy sy manjavozavo, mampifandray ny hetsika ataon'ny mpanjifa amin'ny mombamomba ny mpanjifa iray i AgilOne na dia misy anarana, adiresy, na mailaka ihany aza. Ny angona ho an'ny mpanjifa dia havaozina tsy an-kijanona ka ao anatin'izay dia misy hatrany ireo data vaovao.
Analytics mialoha - Algorithme maminavina mianatra samirery izay mampahafantatra an'i AgilOne's Analytics ary manampy anao hifandray tsara amin'ny mpanjifa. AgilOne dia manome mihoatra ny 400 metatra fanaovana tatitra momba ny fandraharahana anaty boaty hahafahan'ny mpivarotra mamorona sy mamaritra mazava tsara ny mason-tsivana tadiavin'izy ireo amin'ny fanaovana tatitra sy hetsika ao anatin'ny fampiharana - tsy misy kaody fampiasa manokana.
Taratasy ho an'ny mpanjifa 360-Degree - manangana mombamomba ny fantsona omni-feno ho an'ny mpanjifanao, manambatra tahirin-kevitra toy ny dia nataon'ny mpanjifa tsirairay, ny fifandraisan'ny tranonkala sy ny mailaka, ny tantaran'ny fifanakalozana omni-fantsona taloha, ny angona demografika, ny safidin'ny vokatra ary ny tolo-keviny, ny mety hividianana ary ny vinavina. Analytics, ao anatin'izany ny mety hividy sy clusters an'ity mpanjifa ity. Ireo mombamomba ireo dia mampahafantatra ara-stratejika ny toerana tokony hampiasambola, ny fomba hanaingoana manokana ary ny fomba hampifaliana ny mpanjifanao.
Fanamafisana ny angona Omni-Channel - ao anatin'ny sehatr'asa afovoany, ny mpivarotra dia afaka mamolavola sy mandefa fampielezan-kevitra ara-tsosialy, finday, mivantana, foibe fiantsoana ary mitahiry fampielezan-kevitra mivantana ihany koa, eo am-panaovana mpijery, tolo-kevitra ary tahirin-kevitra hafa, azo ampidirina amina fitaovana ao anatin'ny tontolon'ny varotrao.
Personalization voafantina - mandrindra fandefasana hafatra manokana, atiny ary fampielezan-kevitra manerana ny fantsona nomerika sy ara-batana, manome ny feo tsy miovaova ho an'ny mpivarotra na rahoviana na na toerana aiza no ilofosan'ny mpanjifa. AgilOne dia manome ny mpivarotra antoka koa fa manome ny hafatra mety amin'ny olona tsirairay izy ireo, satria i AgilOne dia manome toky fa ny personalization rehetra dia mifototra amin'ny tahiry mpanjifa iray madio sy madio.
Tags: 360-diplaomaagilonecpdangona ho an'ny mpanjifaSehatra ho an'ny mpanjifamombamomba ny mpanjifatoeram-pandraisanaÔmnia-fantsona